महन्थ ठाकुरको सूत्र : शास्त्र कि शस्त्र ? (विचार)
अरूबाट ठगिदाको पीडा र आफूबाट ठगिदाको पीडा एकनासे हुने गर्दैन । पीडाको अनुभव चर्को आफूबाट ठगिदा हुने गरिन्छ । मधेशीहरू अहिलेसम्म आफैबाट ठगिएको अनुभव गरिरहेका छन् । नेपाली राज्यसत्तामा मधेशको औपनिवेशिकरणलाई निरन्तरता दिनेहरूले मधेशीहरूलाई मान्छे नै नगनेको र गन्न नलगाएको इतिहास अझ पनि विद्यमान छ । मधेशीहरूलाई भारतीय देख्ने र दार्जिलिङ्गेहरू र देहरादुनेहरूलाई नेपाली देख्नेहरूको कमी छैन । नेपाली राज्यसत्ता सञ्चालकहरूको नेताको रूपमा खडा भएका एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशीहरू र मधेशी पार्टीहरूले गरेको आन्दोलनबारे गरेका टिप्पणी त्यसको पुष्टि गर्छ ।
मधेशीहरूको हक अधिकारको लडाइ लड्नेहरूले मधेशको अवस्थाको ठोस विश्लेषण नगरी आन्दोलन गर्दै आएको देखिएको छ । नत्र भए माओवादीहरूको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको संख्यालाई हटाइ दिने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि गरिएको शहादत भन्दा धेरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मधेशीहरूले गरेको आन्दोलनमा गरिएको शहादत भयो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनलाई विद्रोहमा ओर्लिसकेका, मधेशका सरकारी कार्यालयमा मधेश सरकार लेखिसकेका मधेशीहरूको त्यो विद्रोही भावनाको आशाको किरणको रूपमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका नाम अगाडि आउँछ । तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले यसलाई सही मान्छन् ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गराउन भएको ८ बुंदे सम्झौताको सन्दर्भमा गुप्ता भन्छन् “देशलाई संविधान सभाको लीकमा हिँडाउनुमा महन्थजीको लचकदार व्यक्तित्वको योगदान रह्यो ।”
मधेशीहरूले मधेश विद्रोहको माध्यमबाट मधेशको समस्या समाधान गर्न खोजेका थिए । तर, त्यसलाई मधेश विरोधीहरूकै हितमा गरिएको सम्झौताको रूपमा लिने आन्दोलनकारी मधेशीहरूको बुझाइ छ । आत्मनिर्णय र स्वायतताको मागलाई पूरा गराउन त्यतिखेर मधेश आन्दोलन भएको थियो । त्यो आत्मनिर्णय र स्वायत्तताका माग भनेको छुटिटन पाउन अधिकार समेतको आन्दोलन थियो । यो विषयलाई ८ बुँदालाई प्रस्ट पार्न नसकेकोले ती आन्दोलनकारीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूको कमजोरी भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
एकथरी मधेशीहरू नेपालबाट मधेश छुट्टिनुपर्ने वकालत गर्दै आफ्ना कायक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यसमा सशस्त्र बलको ताकतमा मधेशलाई छुट्टयाउने राजनीतिक मागसहितको संघर्ष गर्नेमा जयकृष्ण गोइत लगायतका समूहहरू छन् । अर्को राजनीतिकरूपमा गोइतकै राजनीतिक विचारसँग नजिक रहेकाहरूमा अग्रपंक्तिमा डा. सीके राउतहरू रहेका छन् । तर राउतहरूले शस्त्रको बाटो होइन शास्त्रको बाटो अपनाएका छन् । हिंसात्मक होइन शान्तिपूर्ण बाटो अँगालेका राउतका कार्यकताहरूले कार्यक्रम गर्दै गिरफ्तारी दिँदै रिहा हुँदै गरेका छन् ।
आम मधेशीहरू राज्यबाट प्रताडित भइआएका छन् । पहिचान नभएका मधेशीहरूलाई मान्छे नै नभएको सोचाइ राख्नेहरूले नेपाललाई काठमाडौं खाल्डो बाहिर पनि नेपाल देख्छन् तर त्यहाँका आदिवासीहरू वा विभाजित गंगा तटवासीहरूलाई विदेशी वा भारतीय देख्छन् । मधेशी विरोधी र भारत विरोधीहरूले देख्ने यो चश्मा नै दोषी रहेको छ । यसले भ्रम सिर्जना गरेको छ । यो दोषी चश्माबाट मधेशीहरू प्रताडित भइआएका छन् । गंगातटबासीहरूले आफू आफ्नै भूमिमा पहिचानको खोजी गर्दा नेपाली राज्यसत्ताको अधिनमा रहेको औपनिवेशिक जीवन बाँचिरहेको महसुस गर्छन् । सम्भवतः यस्तै बुझाईले गर्दा गोइत र राउत जस्ताले पृथ्कतावादी राग छेडेका छन् । तर उनीहरूको यो राग बेमौसमी भएको मोर्चाका नेताहरूले भन्दै आएका छन् । यो राग बेमौसमी भएपनि मोर्चाका नेताहरूले यदाकदा यो वा त्यो मञ्चमा यो राग गाइहाल्छन् ।
एउटा मञ्चमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यो राग गाइदिएपछि देशभरि नै तहल्का पिटियो । “मधेश एक समग्र राष्ट्र हो र यो छुट्टिन पनि सक्ने” जस्ता अभिव्यक्तिको तार छेडेर यो राग निकाल्दा तहल्का पिटिएको थियो । ठाकुरलाई सज्जन भनेर चिन्नेहरूलाई पृथ्कतावादी गायकहरूको गुरूको दर्जामा पुगेको अनुभव गर्न लगायो । अध्यक्ष ठाकुरका अभिव्यक्ति पछिका प्रतिक्रियाहरूबाट यही बोध अनुभव हुन्छ ।
मानवीय गुण अवगुणबाट निर्मित ठाकुरबाट अब एक विस्तृत योजनाको खाँचो औल्याइएको छ । गुप्ताले ठाकुरलाई यसबारे लिखित आग्रह नै गरिसकेका छन् । ठीक यहीबेला तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको पहिलो महाधिवेशन बुद्धको मावली नवलपरासीको रामग्राममा जेठ ६ देखि ८ सम्म हुन गइरहेको छ । यहाँबाट ठाकुरले मधेशको अधिकारबारे नयाँ सूत्रपात गर्ने अपेक्षा बढाएको छ । त्यो सूत्र के हुने सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । ठाकुरको तयारी र त्यसबारे जानकारी गराइरहँदा दिइएको जानकारी अनुसार ठाकुरको त्यो सूत्र भनेको पृथ्कतावादी निस्तेजसहितको अधिकार प्राप्तिको बृहत् सूत्र हुनेछ ।
तमलोपाको पहिलो महाधिवेशन तयारी समिति अन्तर्गत रहेको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजकले यस्तो जनाएका हुन् । उनले भने “महाधिवेशनमा निर्विकल्प भनेको देशभित्र रहेर अधिकार प्राप्तिको सूत्रको खोजी र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनको विषय हो ।”
निःसन्देह तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले निर्माण गर्ने सूत्र भनेका शास्त्रको सूत्र हुने छ । शस्त्रको होइन । तर त्यसको आधार भनेको आत्मनिर्णय अधिकार सहितको सूत्र हुनु आजको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । पृथ्कतावादी रागबाट अध्यक्ष ठाकुरको नेतृत्वलाई टाढा राख्न सरकारको जिम्मेवारी त्यतिकै छ । यसका लागि अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विभिन्न दलका नेताहरूलाइ रामग्राममा बोलाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । महाधिवेशनमा ठाकुरलाई शास्त्र सम्मत सूत्रको खोजी र आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने बाटोको खोजी गर्न पाउने बुद्धत्व बुद्धको मावलीमा प्राप्त होस् भन्ने उनको शुभेच्छुकहरूको शुभकामना छ ।